“အတွေးစလေးတွေ”: ဓလေ့မပြောင်းသေးတဲ့အခါ . . . မမေ့ကောင်းသေးတဲ့အညာ . . .
Posted by Han Kyi at 11:47:00 am
အညာသားကြီး ရဲ့ ပိုစ့် ကို အညာသူကြီး ဖတ်သွားတာ အားရလိုက်တာ ... အားအရဆုံးကတော့ ငါးခြောက်ထောင်းကြော် .. မှန်ရောင်ဟင်းချို ... ပဲတီးချဉ်သုတ် ဘဲ ဟိ ဟိ...
ကျမလဲ အညာသူပဲတော့ ။
ချင်ကျားပူမှာ ဘယ်ကလောက်ကြာပေမယ့် ပိတုန်းရောင်ကေသာပါပဲတော် ။
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရတော့ ဒေသချင်းသိပ်မကွာသလိုပဲ ။ မှန်ရောင်ဟင်းချို ငါးခြောက်ထောင်းကြော် ပဲကြီးနှပ်နဲ့ ပဲတီချဉ်သုပ်လေးကို ရပ်ဆွေရပ်မျိုး တစ်လှေကြီးနဲ့ အားပါးတရ လွေးချင်စမ်းပါဘိ ။
ဒီလို မြင်းကွင်းမျိုး မြင်ရခဲပါဘိ ဆရာ ရယ်.....
လွမ်း လွမ်းလှပါပေါ့ ။
ဆရာ့ ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီးတော့ အညာဓလေ့ အညာစရိုက်များ ဟိုအရင် အတိုင်းရှိနေကြသေးသမို့ ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ် ။
ဖုန်ထူထူ နေပူပူ ဘယ်လိုလူတွေ ရှုံ့ချ ရှုံ့ချ အညာသားဖြစ်ရတာတော့ ဂုဏ်ယူတယ် ဆရာ ရေ့...။
ရွာအလှုကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တာ ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ ဆြာကြည်ရာ
အညာသူ ကျွန်မအတွက် မစိမ်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါပဲ။ ပုံကလေးတွေကို ကြည့်ရင်း ဟိုတုန်းကနေ့ရက်ကလေးတွေပါ ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့မိပါရဲ့။
ရှားရှားပါးပါး..ဓါတ်ပုံလေးတွေ စာလေးတွေ ကြည့်လိုက် ဖတ်လိုက် ရတာ အရသာ ရှိလိုက်တာ..အညာဆိုတာ တခါမှ မရောက်ဖူးဘူး..လေ။
မိဘနဲ့ နှမအကြောင်းပဲပါတယ်။မိန်းမကိုတော့ အညာသူတွေတွေ့ပြီးမေ့သွားပြီလားဆရာ...